”Niyadda ayaan ka dilnay kooxda Man City” – Evra | Gool FM	Monday, February 8th, 2016	Home
”Niyadda ayaan ka dilnay kooxda Man City” – Evra
(Manchester) 11 Dis 2012 Daafaca dadabka bidix ee Manchester United Patrice Evra ayaa sheegay inay si wanaagsan ula macaamileen kooxda ay deriska yihiin ee Manchester City oo sida uu qabo ay jug macnawiyadeed ama dhanka niyadda ah gaarsiiyeen.
Ntd ayaa soo gababagabaysay guuldarra la’aantii kooxda Citizens oo aan laga badinin 37 kulan oo horyaalka Ingiriiska ah taasoo 2 sano ku dhowaad ah.
Evra ayaa rumeysan ayaa taasi aad u caawin doonto maadaama ay dhaawac u gaysteen niyadda kooxda Man City. ”Guusha aan ka gaarnay kooxda City waxay muhim noogu tahay dhanka niyadda oo laba dhinac u fasirmaysa” ayuu yiri Evra
Wararka	“Chelsea uma qalmin inay barbaro nala gasho” – Van Gaal!
(Manchester) 08 Feb 2016 Tababaraha kooxda Man United Louis ...	Wenger oo ugu danbayntii qirtay in Leicester City ay ugu dhawdahay hanashada horyaalka!
(London) 08 Feb 2016 Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ...	“Waan diidi doonaa dalab walba oo ay iga soo gudbiso Barcelona” – Aymeric Laporte!
(Bilbao) 08 Feb 2016 Daafaca kooxda Athletic Bilbao Aymeric Laporte ...	Karim Benzema oo xalay gaaray rikoor uusan waligiis horay u samayn (Muxuu yahay?)!
(Madrid) 08 Feb 2016 Weerar yahanka reer France ee ...	Guus Hiddink oo gacanta ka taagay in Chelsea ay ka mid noqon karto 4-ta sare ee horyaalka!
(London) 08 Feb 2016 Tababaraha kooxda Chelsea Guus Hiddink ayaa ...	“Barbarihii Chelsea wuxuu noola midyahay guul daro” – Jesse Lingard!
(Manchester) 08 Feb 2016 Laacibka kooxda Man United Jesse Lingard ...	Zidane oo qirtay in kooxdiisu ay ku dhibtooto kulamada ka baxsan Bernabeu!
(Madrid) 08 Feb 2016 Tababaraha kooxda Real Madrid Zidane ...	EEG SAWIRKA: Ronaldo oo dhar aan looga baran soo xirtay kaas oo aad loola yaabay!
(Madrid) 07 Feb 2016 Waxaa la is waydiiyay in ...	Muxuu ka yiri Guus Hiddink dhaawicii cuslaa ee caawa soo gaaray Kurt Zouma?
(London) 07 Feb 2016 Tababaraha kooxda Chelsea Guus Hiddink ...	59 ayey ka soo kala jeedaan ajaaniibta ka dheesha Premier League! Somalia malagu matalaa?)
(London) feb 2016. Horyaalka dalka England waxaa lagu ...	GoolFM Mobile (USA)	About usContactsWaxaan NahayNagala Soo Xiriir	Copyright © Gool FM 2016. All Rights Reserved. Hosted By Afro